धेरै पटक रक्तदान गर्ने रक्तदाताहरुलाई सम्मान – MEDIA DARPAN
धेरै पटक रक्तदान गर्ने रक्तदाताहरुलाई सम्मान
Media Darpan Pvt. Ltd.	 प्रकाशित १ असार २०७९, बुधबार ०८:५१
बनेपा/ जिवनमा धेरै पटक रक्तदान गर्ने रक्तदाताहरुलाई सम्मान गरिएको छ । पनौती–५ मा स्थापना भएको जिवित फाउण्डेशन यतिबेला रक्तदानको महत्वलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभरी फैलाइरहेको छ भने रक्तदातालाई सम्मान र उप्रेरणा जगाउने महाअभियानमा जुटेको छ ।
बनेपा नगरपालिका बडा नं ८ का अध्यक्ष शुभलक्ष्मी मानन्धरको प्रमुख आतिथ्यतामा सो सम्मान कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै रगत दान गर्ने दाता विदुर खड्का,पुण्यवती घले, प्रल्लाद शर्मा हुँमागाई, नारायण सापकोटा, रद्युनाथ हुँमागाईलाई सम्मान गरेको हो । त्यस्तै नो नेगेटिभ ब्लड गुप्र रहेर पनि ४० पटक रक्तदान गर्ने केशवराज पौडेललाई सम्मान गरेको थियो ।
एक पिन्ट रगतले कसैको ज्यान जान्छ भने रक्तदान किन नगर्ने ? विश्वरक्तदाता दिवसको अवसर पारेर सोही फाउण्डेशनले बनेपामा रक्तदान कार्यक्रमसँगै धेरै पटक रक्तदान गर्ने रक्तदातालाई सम्मान गरेको छ । रगतले धेरैको ज्यान जोगाउने भएकाले काभ्रेपलञ्चोक जिल्लामा कसैको पनि रगतको अभावमा मृत्यु नहोस भनेर अभियान सुरु गरेका छौ जिवित फाउण्डेशनका अध्यक्ष जितेन्द्र थापाले भने ।
यो महिनामा मात्रै धुलिखेलको हजार सिढीमा फाउण्डेशनले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ३७ जनाले रक्तदान गरेका छन् । त्यस्तै पनौतीको श्रीकृष्ण पार्टी प्यालेसमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको थियो । सो रक्तदान कार्यक्रममा ६४ जनाले रक्तदान गरेका थिए । त्यस्तै जेठ ३१ गते बनेपामा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा १७ जनाले रगत दिएको थापाले बताए । त्यस्तै असार ४ गते बनेपामै पुनः रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो ।
शरिरमा आफै खेर जाने रगतको नियमित दान गरेमा शरिरमा फाईदा हुने भएकाले रक्तदान नियमित गराउन अभियान संचालन गर्ने थापाले बताए । रक्तदाता दिवसको अवसरमा काभ्रेमा ७० पटकभन्दा धेरै रक्तदान गर्ने रक्तदाता र रेयर नेगेटिभ ब्लड गुप्रमा पर्ने समुहका रक्तदातालाई फाउण्डेशनले सम्मान गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार पनौतीका डल्ले कामी पक्राउ
पनौतीको ‘ज्याः पुन्ही’ जात्रा सकियो
जिल्ला सहकारी संघको आयोजनमा संचालित दुईदिने गोष्ठी सम्पन्न